को हुन् २९ औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा नियुक्त धिरज प्रताप सिंह ठकुरी ? - Lekhapadhi.com मुख्य समाचार : Lekhapadhi.com lekhapadhi: global magazine of news and opinion
को हुन् २९ औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा नियुक्त धिरज प्रताप सिंह ठकुरी ?
लेखक : लेखापढी १८ बैशाख २०७९, आईतवार १६:१२ मा प्रकाशित
सरकारले धिरज प्रताप सिंहलाई २९ औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्त गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटरमा बसेको बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको हो ।
दैलेखको विजौरामा २०२४ सालमा ठकुरी परिवारमा जन्मिएका सिंहले कानूनमा स्नातक र मानविकीमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरेका छन् । दैलेखबाट उनको परिवार बाँकेको नेपालगञ्जमा बसाईं सरेको थियो । धिरजको बाल्यकाल नेपालगञ्जमा बित्यो । स्थानीय नारायण माध्यमिक विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएका सिंह फुटबल खेलमा समेत अग्रपंक्तिमा थिए ।
प्रहरी अधिकृतका अब्बल एबं कुशल नेतृत्त्वदायी सिंहले २०५८ मा उनले गोरखा दक्षिणबाहु पाएका थिए । सिंहले प्रवल जनसेवाश्री चतुर्थ र सुप्रवल जनसेवाश्री तृतीय पदक पाएका छन् ।
सिंह २०४९ चैत ११ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका हुन् । डिएसपी हुँदा उनले गोरखा, नुवाकोट र दोलखा जिल्ला कमाण्ड गरेका गिए । प्रहरी उपरीक्षक एसपी भएपछि पर्सा र दाङ जिल्लाको कमाण्ड गरे । उनीसँग लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा उनले संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय बागमती र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको कमाण्ड गरेका थिए । डिआईजीमा मधेश प्रदेश र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो कमाण्ड गरेका सिंह २०७८ चैत १७ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
२०४९ साल चैत्र ११ गते प्रहरी निरीक्षक बनेका सिंह कार्य कुशलताका हिसावले अब्बल प्रहरी अधिकृत हुन । उनले हरेक पदमा रहँदा आफनो कार्यकुशलता प्रस्तुत गरेका छन् । एसएसपी हुँदा प्रहरीको मनोवल खस्किएको समयमा उनले प्रहरीको अपराध महाशाखाको कमाण्ड सम्हालेका थिए । अपराध महाशाखामा काम गर्न चुनौती रहेको समयमा ३३ किलो सुन प्रकरणमा दिवेश लोहनीसहित अन्य दुई प्रहरी अधिकारि पनि निलम्बन परे ।
धिरज प्रताप सिंहले तत्कालीन अपराध महाशाखा हाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको कमाण्ड गरेका थिए । विस २०७५ साउन २१ मा ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न अजय तामाङ र गोपाल तामाङ प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका थिए । त्यतिवेला धिरज सिंह महाशाखाको प्रमुख थिए ।
प्रहरी उपरीक्षक हुँदा सिंहले दाङ जिल्लाको कमाण्ड गरेका थिए । डीआईजी भएर सिंहले मधेश प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय अुनसन्धान व्यूरोको कमाण्ड गरेका छन् । गत चैतमा धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक बढुवा भएका थिए।
तत्कालिन विषम परिस्तिथिमा महाशाखा नियुक्त भएका थिए एसएसपी धिरज प्रताप सिंह। महाशाखामा कार्यरत धेरै प्रहरीको मनोबल घटेको बेलामा उनीहरुको मनोबल उच्च राख्दै काम गराउनु सिंहको पहिलो चुनौती थियो। प्रहरी संगठन भित्र नेताको स्वार्थ बाझिएका कारण पछि परेपनि उनी अरुभन्दा सिनियर प्रहरी अधिकृतको रुपमा रहेका हुन् ।
घैंटे इन्काउण्टर पछि शान्त रहेका गुण्डा सलबलाउन थालेका अपराधिक गुण्डागर्दी एबं उपत्यकामा बढ्दो अपराधलाई नियन्त्रणमा ल्याउन ठुलै चुनौती थियो। त्यसमाथि राजनीतिक आवरणमा गरिने अपराध झन भयावह थियो। उक्त समयमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनमाथि दिनदहाडै गोलि हानि हत्या गरिएको थियो। जुन घटनाले व्यवसायी र सर्वसाधारण त्रसित थिए। त्यस्तो समयमा महाशाखालाई पुरानै पोजिसनमा उभ्याउन सिंहको ठुलो भूमिका रहेको थियो ।
सिंह महाशाखामा रहँदा प्रहरीले ४ इन्काउण्टर गर्यो। जसमा २ जना घाइते भए भने २ जना प्रहरी सँगको मुठभेट मारिए। ०७५ जेष्ठ २८ गते विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न अशोक लामामाथि प्रहरीले गोली प्रहार गरी नियन्त्रणमा लियो । लामाले ललितपुरका घरजग्गा ब्यावसायीलाई धम्काउने, क्रसर उद्योगबाट चन्दा उठाउने गरेका थिए । २०७५ असार ७ गते लुटपाटमा संलग्न खुडे भनिने सिन्धुपाल्चोक, बाह्रबीसेका अमरबहादुर तामाङलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलायो। अमरले ०७५ जेठ २४ गते भक्तपुरमा ताप्लेजुङका बिरेन तामाङलाई डलर साटिदिन्छु भनी बोलाएर १९ लाख ६० हजार लुटेका थिए । ०७५ साउन २० गते सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नपा–९ ज्यामिरे घर भई काठमाण्डौ –३२ काँडाघारी बस्ने चमेली खड्काको छोरा वर्ष ११ को निशान खड्कालाई अपहरण गरी हत्या गर्ने नुवाकोट घर भएका गोपाल तामाङ र सिन्धुपाल्चोक कर्थली घर भएका अजय तामाङसँग प्रहरीको मुडभेड भयो। ०७५ साउन २१ गते भक्तपुर सुर्यविनायक–८ पाईलट बाबाको आश्रम जाने बाटोको जंगलमा भएको उक्त मुडभेडमा उनीहरुको मृत्यु भयो। यस्तै, ०७५ मंसिर २१ गते कालोपुलमा बिभिन्न डाँका, लुटपाटका घटनामा संलग्न रही फरार रहेका सुनसरीको ईटहरी–५ घर भई काठमाण्डौ– २९, अनामनगर बस्ने ४६ वर्षिय राजन लिम्बूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले गोली चलायो। लिम्बु घाईते भए। सिंहले अपराध अनुसन्धानमा रचनात्मक कार्य गरि उत्कृस्ट कार्य सम्पादन गरेको बृहत रेकर्ड छन् ।
३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रहे उनले अब एक वर्ष प्रहरी संगठन चलाउनेछन् । आईजीपीमा नियुक्त सिंहले २०७९ वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने छन् ।
Interview with Minister for Industry Nabindra Raj Joshi in Kathmandu, on Sunday, September18, 2016. PHOTO: Balkrishna Thapa Chhetri
जनप्रिय नेता, ‘सादा जीवन उच्च विचारक’ कांग्रेश नेता नविन्द्रराज जोशीको निधन
ब्रिटेन: दिवङ्गत राजकुमार फिलिपको जीवनी
ठकुरी समाज महासंघ नेपालका रास्ट्रिय अध्यक्ष सिके सिंहको निधन
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खड्कजित बरालको निधन
एनआरएनए बरिष्ठ उपाध्यक्षमा सफल समाजसेवी कृष्ण जीवि पन्थको उम्मेदवारि
राप्रपा अध्यक्षमा निर्बाचित राजेन्द्र लिङ्देन को हुन् ?
सरकार बनाउने अरू विकल्पमा प्रवेश नगरी विघटन गर्न मिल्दैन : संविधानविद् आचार्य
अनलाइन मिडिया ‘नियन्त्रण’ गर्न निर्देशिका ल्याउने तयारी: मन्त्री पार्वत गुरुङ
सुर्य चिन्ह बिक्री हुने ब्याबसायिक चिन्ह हो?- भीम रावल
बागी उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन देउवाको आग्रह